Iyo yekutanga kambani chirongwa - Afrikhepri Fondation
Iyo yekutanga chirongwa chevanhu
L 'kunyora chishandiso chekuchengetedza uye kutapurirana kweiyo tsika capital inounganidzwa nedanho rekutanga. Akazvarwa muEjipitori, chinyorwa ichi chakatumirwa kuvaFenikiya (vazukuru vevaIjipita) kubva kune avo vechiBarbarians vakakwereta vachiregeredza chakavanzika chechizvarwa chayo: chiitiko chekugadzira chemhando dzekufananidzira, zvinhu zvemutauro mutauro.
Kunyora saka ndiyo nguva yakakosha mukutanga nzira yekuti, kudzivirira kusvibiswa kwayo, vatangi vekuEgypt vakangwarira kuhwanda kubva kune vasina kudzidza.
Zvinosuruvarisa, kupinda kusingaperi kwenzanga yevaFarao kwakazowana kungwarira kwe "vachengeti", uye vadzidzi vevatorwa vakapinda mutsika yekushandisa zvisirizvo zvakanyorwa uye kuvhiringidza ruzivo rwekutanga uye tsoko yayo.
Izvi zvakagadzirira nzvimbo ye "Kudzoreredzwa kwehunhu" iyo iyo ideologist yenguva yakasununguka-yemapepanhau vachazivisa zvisina kubatana kuti "rudzi" rwavo ndirwo rwakagadzira budiriro, mushure mekuchengeta kuti vanyepedzere kubva kumusoro kusvika pasi, "Kuchenesa", sekureva kwekufananidzira kwaNommo Cheikh Anta Diop.
Kunyangwe vana vebudiriro yevaEjipitori vanova masasi eSahara havana kupunyuka hasha dzeava "Makava" avo, nekunyepedzera kwekuita kuti vatema vatema vanzwisiswe uye vade (sic), vakatsvagisa misha yavo nenzvimbo dzavo tsvene uye vakaita Ruoko rwezasi pane rutsigiro rutsvene rwemaitiro avo ekufananidzira (masiki nemifananidzo) vasingakanganwe kuita kutaura nekuzvidira kana pasi pekutyisidzira vatangi vanokudzwa!
Iyi ndiyo nzvimbo yekutaura kuti kupamba kwevatema Africa hakuna kutarisa zvakanyanya pazvinhu zvehunyanzvi, sezvatinotungamirirwa kutenda, zvakatambanudzira kune chiratidzo chake chenyika, Dionysian. Ngano dzemuAfrica pasina mubvunzo dzakasimudza pfungwa yehupenyu hwekuMadokero uye dzakakurudzira kubuda kwehunyanzvi hwehupenyu. Mukupedzisira, kuendeswa kunze kwenyika kwetsika nemagariro zvemuAfrica, izvo zvaifanirwa kumutsa rudo kumunhu mutema, zvakaguma nekuwedzera kwechisarura. Mhedziso yakasvikwa yekuti vatema vemuAfrica vanhu vakaderera: vanhu-vadiki vakasikwa naMwari kuti vashandire vachena varume vakuru!
Mhedzisiro yemhedzisiro yakazobva mukushambadzirwa kwe "zvakanyorwa" kushandurwa kwenzvimbo yetsika kuita "Marara" uko, kunyangwe neCensorship, varume vanoedza kudzinga kutambudzwa kwavo kwemumuromo-anal kwakanyorwa pabepa.
Tsvina iyi inogona kushanda sechiratidzo chekufananidzira kwekuberekwazve kwevanhu, hazvifanirwe kushamisika kuti ndizvo zvavari, zvinoti, vanhu vezvirwere zvemagariro. Maitiro eku "kubuda" kana vanyori vekufananidzira vachiratidza kuve vanonyanya kutapurwa?
Nekuita kuti mutema atende kuti kusunungurwa kwake kunouya kubva mukugadzwa kwetsika iyi yerusarura, kuti vavengi vake vanotarisira kumubvisa nekusingaperi.
Chinhu chakakosha nhasi, munguva dzino dzematambudziko, hachifanirwe kunge chiri chekunetseka kwekugadzira "magwaro akanaka", asi kutanga "kuchenesa matanga eAugean", ndiko kuti guruva iyo tsika inokiya hunhu mukutyaira kudzokorora huipi hwekare hwayo.
Muchokwadi, haingori tsvina chete kubva kumafekitori nemashandisirwo ayo anosvibisa mararamiro ehupenyu hwevanhu, asiwo zvigadzirwa zvezviitiko zvavo zvakanyorwa zvakanyurirwa nemumuromo-anal impulses zvisiri pasi pesimba rekutonga.
Panyaya iyi, akabvunzurudzwa, munyori ane mukurumbira anoshuma kuti anogara akatakura mupepa rake remapepa uye zvinyoreso kana akabatwa nechokuda kunyorera kuti azvisunungure kubva kumadhimoni ake.
Ichi ndicho chibvumirano chakatemerwa vanhu kutyora Mutemo weVatangi Vokutanga, maererano nekutangira (uko psycho-therapy ndiyo inotsiva) ndiyo ndima inokosha inoita kuti zvikwanisike kufananidzira zvinotyaira uye kuwana nzanga yevarume.
Nekuti sekutanga kwekare, psycho-therapy inovavarira kubvisa murume "anotambura" wekusaziva kwekutanga (iwo wazo wevaBambara), izvo zvinoita kuti atende mungano yebondexuality, mhedzisiro yekuzivikanwa. kubva kumwana kuna mai vake, hwaro hwe "primary narcissism".
Zvinonakidza kucherechedza tichipfuura kuti ichi chinoyera chikuru narcissism, iyo murume wekuMadokero anonamatira ku "kudzivirira" zino nekurovera kutendeka kwemuviri wake unofungidzirwa kutyisidzirwa ne (yekufananidzira) kutemwa, iri muchokwadi iko kufungidzira kwe amai vanotora mukana weiyo fusion kururamisa izvo zvinonzi "kusaruramisira" kwekutorerwa nhengo yemurume.
Pakupedzisira saka, murume anonyengerera anoita zvine hunyanzvi kumatangiro echisimba ari pasi pesimba raamai vanopenga kubata kwechimoko. Kugadziriswa kwemwana "fetishized" saka kunoenderana pamwe neyaamai vechirume. Zviri pachena ichi chokwadi chekutanga icho mudetembi Aragon anoratidza, nenzira yake, kana achizivisa kuti: "kudzidzisa amai kudzidzisa nyika".
Hatigone kuzvitaura zvakakwana: "pakutanga kwaive kutanga" kwakagutsikiswa naamai avo vakawana kugona kwekufananidzira kwekutambudzika kunokonzerwa nekukanganiswa netsaona kwechiroko (chiratidzo chekubvisa). Uyu ndiye akaita kuti mwana wevanhu abude kubva mukusiyana nemasikirwo kumuita iye se "munhu anogara". Izvi zvinotibvumidza kuti titaure kuti njodzi yazvino yekudzoreredza iyo inotyisidzira budiriro inokonzereswa nedanho rekutorwa kwevarume vakatapwa nekutakwa kwe "zvakawanda-kunakidzwa" uye "yakawanda purofiti", nekuda kwekushayikwa vanamai vekufananidzira vanoremekedza hunhu hwevana.
Isu tine hanya uye tinotaura nezve kudziya kwepasi "nguva dzese" uye isu tiri vechokwadi. Musangano wepasi rese wevatungamiriri venyika panyaya iyi yakakomba wakabudirira uye icho chinhu chakanaka kwazvo. Asi isu tinoziva here kuti mabviro ehuipi hwese uhwo hunotambudzwa nevanhu anowanikwa mune kusaziva kwevanhu kwakasimbiswa neChishuwo chekuva nemasimbaose, uye kuti ndipo patinofanira kutsvaga mhinduro dzavo? ?
Nekudaro kukosha kwekutanga kwekutanga uko, mukusimudzira kutsunga kwevanhurume pamwe nekubatana kwavo kwakabatana, kunoshandira kugadziridza kwehukama kwawakagadzira, kusiyana nemaitiro ayo ari mukumisikidza yekare ngano yebondexuality, vector yekudzokera kurima uye hutsinye hwebharbarism.
Pfungwa yebondexuality inongowanikwa muNegro-Africa tsika. Yakatumirwa naBaba vekutanga, wekutanga mutant, kururamisa nzira yekumisikidza vanhukadzi nekubvisa chikanda chepamberi neclitoris.
Izvo pasina mubvunzo zvakatora nguva yakareba kuti zvionekwe kuyedza kwevarume kuita hupenyu hwemagariro.
Izvo zvaive zvakafanira kuti uzive kuti ivo vekutanga, vakatakurwa pakuita bonhora uye kurwira hutongi hwepabonde, vaive vasinga "garisane" Izvo zvavakaita sevanhu vakazvimiririra uye vachigara mumota.
Iko kwaifanira kuve yakagadziriswa kuti chipfeko chechipfeko semukadzi uye chikoro chepenisita chakavhara chido chepabonde uye zvepabonde.
Izvi zvaive pasina mubvunzo mavambo epamuviri uye maitiro ekutanga: iko kwekufananidzira kubvisa kugutsikana kwenhengo dzekufungidzira dzepabonde, kusimudzira kufungidzira kwenhengo dzepabonde chaidzo dzakagadzirirwa kugutsikana pabonde munharaunda yemagariro.
Zvakare, iyi tsamba yemagariro inotsanangurwa zvakajeka nashe wekutanga kumunhu anenge achinyorera: "kubva zvino, hauchazogoni kuita bonhora kuti uzvipe kunakirwa. Sosaiti inokurambidza uye inoda kuti iwe ugutse zvishuwo zvako nemumwe wako anoda ".
Nekudaro, netsika, pfungwa dzemurume (mutakuri wepenisheni) uye mukadzi (akapiwa mukadzi) akabuda. Uye aya aive mavambo evaviri, ichi chinhu chehupenyu hwemhuri uye sero renharaunda.
Tsika yekutangisa inotidzidzisa kuti tsika, hushamwari hwepabonde nemitambo yemagariro zvakagadzirwa zvine "simba" rinokonzereswa nekubviswa kweganda repamberi pamwe neclitoris. Mune mamwe mazwi, nzanga inomisa chinorambidzwa chinotadzisa hunhu hwemunhu kuti "awedzere kunakirwa" uye "kuwanda-purofiti".
Naizvozvo tine chikonzero chekushamisika kana kuda kweWestern Nations iyo inokurudzira avo vevatema Africa kuti vasiye tsika yavo yechinyakare yekuita bonde (zvichibva pahunhu hwepabonde), uye kubva zvino mamiriro ezvinhu "rubatsiro rwekusimudzira" kumutemo wavo runako zvine chekuita neungochani hazvizosimudzire kukunda kwehupenyu hwerufu mangwana, kupenga kwakakosha, kupihwa matanda.
GMOs, yakananga kuchenjedzo yepasirese - Documentary (2008)
Zvisunungure pachako kubva kuKarma yako - Doreen Virtue (Audio)
Kuzvipira - Didier Drogba
Zvinodzidziswa zveTembere - Vol 3 (PDF)